Ururka Xamaas ee reer Falastiin oo Israel ku Eedeeyey in Dishay Khabiir Drones samayn jiray – Xeernews24
18. Dezember 2016 /in WARAR/NEWS /von admin
Ururka hubeysan ee u dagaalama xoreynta Falastiin ee Xamaas ayaa ku eedeeyey Israel, dilkii loo geystey Maxamed al-Zawari oo ahaa khabiir ku xeel dheer sameynta diyaaradaha aan cidna wadin ee hubeysan ee loo yaqaan Drones-ka.
Zawari oo ahaa 49 jir ayaa maalintii Khamiista lagu diley dalka Tuurniisiya, waxaana rasaas looga furey madaxa, gurigiisa hortiisa magaalada Sfax.
Xammaas ayaa sheegtey in dilkaan ay soo abaabushey Dowladda Israel, waxaana ay ku dhawaaqeen in ay u aargudi doonaan Khabiirkooda dhanka diyaaradaha cirka.
Afhayeenka Garsoorka magaalada Sfax ee dalka Tuurniisiya Mourad Tourki ayaa raadiyaha Tuuniisiya ee Shems u sheegay in ugu yaraan 8 qof oo u dhashey dalka Tuuniisiya dilka loo qabtey. Sidoo kale waxaa dilan loo qabtey Suxufi u dhashey Tuurniisiya kaas oo lagu qabtey dalka Hangeeriya , waxaana lala qabtey nin ku shaqeeya Kaamarada.
Xammas ayaa dilkiisa kadib sheegtey in uu kamid ahaa ciidankeeda rasmiga ah muddo 10 sano ah, waxaana ay sheegeen in uu ka qayb-qaatey guul Xamaas ay ka gaartey dagaal ay la gashey Israel sanadkii 2014.
Cabdi Iley oo Hada uun Ogaaday dhibta jirta iyo in u Hantidi Ummada Dhanta ku...